नयाँ 'स्पाइडर-म्यान' संसारभरि सुपरहिट हुनुको कारण के? - नागरिक रैबार
नयाँ ‘स्पाइडर-म्यान’ संसारभरि सुपरहिट हुनुको कारण के?
कोरोनाले लामो समय सिनेमा हल बन्द गरायो। हल नियमित खुलेपछि पनि धेरै फिल्मले चर्चा बटुल्न सकेनन्। तर यो महिना अमेरिकादेखि नेपालसम्मका हलमा खुबै जमेको एउटा फिल्म हो ‘स्पाइडर-म्यानः नो वे होम’।
अमेरिकी कम्पनी मार्भल भव्य फिल्म बनाउनेमध्ये पर्छ। भव्य भए पनि यसका सबै फिल्मले राम्रो प्रतिक्रिया पाउँदैनन्। ‘स्पाइडर-म्यानः नो वे होम’ भने भव्य त छँदैछ, सँगसँगै यसले संसारभरिका दर्शक र फिल्म समीक्षकहरूको राम्रो प्रतिक्रिया पनि पाइरहेको छ।
जोन वाट्सले निर्देशन गरेको यो फिल्मले दस दिनमै संसारभरबाट ६० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी कमाइसकेको छ। कोरोना महामारीपछि ‘ब्लकबस्टर’ बन्न सफल यो पहिलो फिल्म हो।
सन् ७० दशकको आखिरीबाट स्पाइडर-म्यानमाथि फिल्म बनाउने सिलसिला सुरू भएको थियो। पहिलोपटक सन् १९७७ मा ‘द अमेजिङ स्पाइडर-म्यान’ को पहिलो फिल्म बन्यो। यो सुपरहिट भएपछि यही सिरिजका थप दुईवटा फिल्म बने।
करिब चार दशकमा थुप्रैतिर घुमेपछि सन् २०१६ मा मार्भल कम्पनीले स्पाइडर-म्यानमाथि फिल्म बनाउने अधिकार सोनी पिक्चर्सबाट किन्यो। लगत्तै सन् २०१६ मै रिलिज भएको मार्भलकै ‘क्याप्टेन अमेरिकाः सिभिल वार’ मा पहिलोपटक टम स्पाइडर-म्यानका रूपमा देखिए।
त्यसपछि सन् २०१७ मा मार्भलले आफ्नै शैलीमा ‘स्पाइडर-म्यानः होम कमिङ’ बनायो। पिटर पार्कर उर्फ स्पाइडर म्यानको भूमिकामा २१ वर्षे टम हल्यान्ड देखिए।
अहिले रिलिज भएको ‘स्पाइडर-म्यानः नो वे होम’ त्यसैको तेस्रो श्रृंखला हो।
वर्षौंदेखि विभिन्न रूपमा बन्दै आएको स्पाइडर-म्यानको यो नयाँ फिल्म ‘नो वे होम’ मा के छ त त्यस्तो खास?
हामी सबै लौकिक संसारमा बाँच्ने भएकाले हामीलाई अलौकिक संसारले रोमाञ्चित त गराउँछ तर यदि त्यही कथा हाम्रो वास्तविक जीवनसँग जोडियो भने त्यसको प्रभाव अझ धेरै हुन्छ। ‘नो वे होम’ ले स्पाइडर-म्यानको कथालाई अलौकिक संसारबाट लौकिक संसारमा ल्याएको छ। त्यसमा पिटर पार्करको कथा हाम्रो वास्तविक जीवनसँग जोडिन्छ। फिल्म हेरूञ्जेल सुपरहिरोको संघर्ष देखेर हाम्रा आँखा रसाउँछन्। उसको भावनाले हाम्रो मुटुमा पनि गाँठो पार्छ।
‘अथाह शक्ति अथाह जिम्मेवारीसहित आउँछ’ भन्ने फिल्मको सन्देश स्पाइडर-म्यानका लागि मात्र होइन, मार्भलका लागि पनि हो।
चितवनमा अर्ना बचाउनै मुस्किल